एक के हो परिवार सम्बन्ध? यो दुई मान्छे को सह-अस्तित्वको एक विशेष रुप हो। परिवारको मुख्य उद्देश्य सधैं अर्थव्यवस्था को संयुक्त व्यवस्थापन, त्यहाँ र procreation भएको र यसका सबै सदस्य को आवश्यकता बैठक भएको छ।
परिवारको मनोविज्ञान जीवन - विज्ञान धेरै नाजुक छ र खातामा धेरै nuances लिएर आवश्यक छ। प्रत्येक व्यक्ति फरक छ। उसले आफ्नो आवश्यकता, बानी र चाहना छ। एक मानिस वा महिला एक्लै बस्ने बेला, त्यसैले स्वतन्त्रता, permissiveness एक भावना, र त्यहाँ छ। धेरै विवाह पछि यो सबै कहीं गायब भन्ने विश्वास गर्छन्। तर, यो छैन साँचो हो। सबै विशिष्ट परिस्थितिको व्यक्तिको सम्बन्ध मा निर्भर गर्दछ। तपाईं साधारण पूर्वाग्रहको बोलिहाल्यौं भने छैन र आफ्नो मन बाँच्न - तपाईं चाँडै सही विपरीत साँचो हो कि भन्ने महसुस गर्नेछौं।
पारिवारिक जीवन को मनोविज्ञान अविश्वसनीय जटिल देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तपाईं यसलाई अध्ययन गर्न धेरै प्रयास पार्छन् छैन। यसलाई आफ्नो साझेदार संग कुरा गर्न सक्षम हुन महत्त्वपूर्ण छ। साधारण, दैनिक कुराकानी तिनीहरूलाई मदत spouses धेरै अवरोध हटाउन र समस्या को सबै भन्दा बच्न। व्यक्ति बारे केही सिक्न गर्न, यो धेरै वर्ष वा सादा कुरा सँगै मिलेर बस्न सम्भव छ।
आफ्नो एक प्रेम, उदाहरणका लागि, तपाईंले के फूल जस्तै र के सार्वजनिक ठाउँमा रुचि हो, खाने को लागि बरु छ भनेर अनुमान गर्छन् गर्न सक्दैनन्। यो माध्यमबाट बाहिर मित्र। तर यो बारेमा कुरा गर्न धेरै सजिलो छ। यो लड देखि गल्ती र अप्रिय आश्चर्य विरुद्ध सुरक्षा, र त्यसैले हुनेछ।
वैवाहिक संघर्ष को मनोविज्ञान ब्रह्माण्ड को अध्ययन, उदाहरणका लागि, भन्दा कुनै कम रोचक छ। कल्पना लागि कोठा को प्रशस्त असीमित छ। श्रीमान्सँगै quarreling ठूलो इच्छा भएको पनि एक सय, एक हजार कारणहरू पत्ता लगाउन सक्दैन। यसो गर्न कहिलेकाहीं पर्याप्त वरिपरि हेर्न। र अचानक कहीं फोहोर sock, भाँडा धोएर छैन छ, वा बाथरूम प्रकाश फेरि बन्द छैन। हरेक सानो कुरा एक विशाल भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, र परिवार मा विकार पैदा।
कुनै पनि संघर्ष एकदम सजिलै बचा गर्न सकिन्छ। जोडी पहिले नै राम्रो प्रत्येक अन्य ठेगाना हो, धेरै वर्ष को लागि सँगै बस्ने गरेका छन्। तिनीहरूले साझेदार, साथै रिस कसरी आश्वस्त पार्नुभयो थाहा। स्मार्ट महिला त राम्रो उहाँबाट चाहेको सधैं हासिल कि, पतिको नियन्त्रित थाहा छ।
पारिवारिक जीवन को मनोविज्ञान तुरुन्तै प्रेम दिइएको छैन। युवा विवाहित दम्पतीको एक, सार्वभौमिक सल्लाह दिन सक्छन्। तपाईं खराब स्वभाव मा एक प्रेम एक हेर्न र quarrels नीलो बाहिर तोड्न सक्छ भने, बस शान्त राख्न। उहाँले चाहन्छ भने उसलाई बाहिर बोल्न दिनुहोस्। छैन आगो गर्न इन्धन थप्नुहोस्। चिल्लो, शान्त आवाज बोल्न। उहाँले (त्यो) मन र दृढता आफ्नो शान्ति महसुस हुनेछ सक्छ। त्यसपछि तपाईंले बोल्ने मौका हुनेछ।
को मनोविज्ञान पारिवारिक जीवन छैन केवल spouses सम्बन्ध समावेश छ। विशेष गरी पहिलो एक नियम, आफ्नो जीवन, रूप, आमाबाबुको सख्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत ठाउँ लिन्छ। अक्सर यो जवान दम्पतीले unnerving र quarrels लागि थप कारण प्रदान गरिएको छ। यो स्थितिमा हुन गर्न, तपाईं बस अग्रिम निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरूको आमाबाबुले। उदाहरणका लागि, आफ्नै बस्न चाहन्छु र आफ्नो हस्तक्षेप सहनु छैन भन्ने खुलस्त भन्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, धेरै आमाबाबुले, विशेष गरी आमा, यो इच्छा बुझ्न छैन। यस मामला मा, तपाईं एक राम्रो मनोवैज्ञानिक परिवार सम्बन्ध मद्दत गर्न सक्छ। उहाँले एक विशेष अवस्थामा कार्य कसरी राम्रो सल्लाह दिन्छ।
मनोविज्ञान मा Internalization - यो छ ... के यो प्रक्रियाको भूमिका छ?
काममा रुचि एक संघर्ष। समस्या कसरी समाधान गर्ने?
एक विश्वस्त व्यक्ति कसरी बन्न? कार्य गर्न मार्गदर्शन
आफ्नो युवावस्थामा श्वार्जनेगर। संक्षिप्त जीवनी। ख्याति कमाउने बाटो
Kalmyk चिया: लाभ र हानि